Ingabe kufanele uthathe noma wenqabele umuthi wokugomela i-Covid-19 uma uba yimpoqo? Okufanele ngikwenze? : UMartin Vrijland
Kancane kancane, abantu abaningi bayaqala ukubona ukuthi ohulumeni emhlabeni wonke bafuna ukwenza izinguquko ezingapheli emphakathini wonke. I "smart Lockdown" iguqulwa kancane kancane ibe yaphakade, lapho kufanele uyithenge kabusha inkululeko yakho. Okujwayelekile okusha kuba yimitha nengxenye yomphakathi futhi kufanele uzikhokhele ngokwakho.
Ungaqasha abaluleki abizayo ukuthi bakweluleke ngokuthi ungayimisa kanjani inkampani yakho kumitha owodwa nohhafu futhi ungathembela kumaki wentengo; ithegi yentengo yakho ngoba mhlawumbe udinga ukuthola imvume esemthethweni yezinyathelo zakho nethegi lentengo yekhasimende, ngoba othile kufanele akhweze leyo mitha ebophezelayo nesigamu kanye nokwehla kwemali etholwayo.
Ngaphezu kwalokho, umuthi wokugomela oluzayo we-covid-19 uzoba oyimpoqo.
Ngaphandle kombuzo wokuthi ingabe umuthi wokugoma uhlolwe ngokuphelele noma cha kude nombuzo wokuthi sifuna noma cha yini lelo qoqo lamamitha ayihafu omphakathi: ohulumeni bayamangaza futhi empeleni abayi kubantu ababhikishayo lalela.
Ubuchwepheshe buzosetshenziselwa ukuqapha zonke lezo zinyathelo. Kade ngakubikezela lokho incwadi yami ngo-2019 futhi sengivele ngakubikezela lokho ezihlokweni eziningi eminyakeni yamuva. Lokho kubuchwepheshe nedatha enkulu kuzomane kudingidwe, ngoba kunezinkampani eziningi kakhulu ezingathola i-nibble ehehayo futhi. Baningi manje asebenzela izinkampani ezinkulu ezihlinzeka ngezixazululo ze-ICT noma izinhlaka zikahulumeni eziqinisekisa ukuthi bangaqhubeka nokukhokhela ikhaya labo futhi banakekele imindeni yabo. Labo bantu bangabona ukuthi kukhona okungahambi kahle, kepha uma kukhulunywa ngokuthi kumele bakhethe, iningi likhetha ukugoba ngaphezulu ukuze liqinisekise imali engenayo.
Sonke sazi njengamanje ukuthi lo mphakathi omusha uzobukeka kanjani. Abezindaba kanye nezwe bayaqhubeka nokusho ukuthi ukuthengisa kuyadingeka futhi nendlela eyethulwa ngayo isinyathelo ngesinyathelo. Isinyathelo ngesinyathelo, ukuze amasheya aqhubeke nokukholelwa ukuthi yizinyathelo ezidingekayo zokuqukatha i-coronavirus.
Inqubo izohamba ngamaza ukusuka 'ekuqiniseni ibhande' kuya 'ekumeni i-reins ivele' bese kuba negagasi elilandelayo. Abezindaba, ochwepheshe (ukukhiqizwa kwezibalo) nezepolitiki bazosikhombisa, ngemuva kwenkathi yokujwayela imitha eyodwa nesigamu nendawo encane yokuhamba, ukuvuselelwa kwegciwane le-corona, ngemuva kwalokho kwethulwa ingxenye elandelayo yephakheji ngabantu bazokwanga.
Abafundi abakweminye imithombo yemidiya bavame ukufuna imininingwane yokuthi sidlalwa kanjani. Sithanda ukufunda ukuhlaziya okuningiliziwe kokuthi imijovo yokugoma iyingozi kangakanani, ukuthi ama-5G angasetshenziswa kanjani ukusithinta, ukuthi amalungelo obunikazi eMicrosoft asinikeza kanjani isitifiketi sokugoma kwedijithali, ukuthi uBill Gates ufaka kanjani embonini yezindaba nokugoma, izinhlelo zokusebenza zingasetshenziswa kanjani ukusisiza ukuqapha. Silambele imininingwane yokuthi siqhutshwa kanjani kuwebhu ukuze sikwazi ukuxhawula abanye ukuthi iyiphi ingozi eza ngathi.
Kubaluleke kakhulu lokho, ngoba uma ungazi ukuthi iyiphi ingozi ekujaha, awugxili eceleni ngesikhathi. Noma kunjalo, kufanele kube nesinyathelo esilandelayo. Kufanele size nezisombululo.
Lapha kuwebhusayithi ufunde izindatshana ezimbalwa zokuthi singaya kanjani emphakathini lapho kungekho khona imali eyengeziwe, umphakathi lapho izinhlelo zokusebenza, amakhamera nedatha enkulu azi kahle ukuthi sikuphi noma sinalo yini izinga lokushisa elifanele (akukho covid- 19) kanye nobani sonke esixhumana naye. Isinyathelo esilandelayo ukuxhumanisa yonke le datha nohlobo lohlelo lwamanqaku. Ngokuthola noma ngaphandle kwenqaku elanele kungenzeka noma kungaphumi ngaphandle, ngesitimela noma ngendiza. Sonke singakubikezela manje. Isixhumanisi sayo yonke leyo mininingwane kumaki wedijithali kanye nesixhumanisi esilinganisweni sebhange lakho ledijithali siqedela le ndaba.
Senziwa kuwebhu kanti iChina ihlinzeka ngesibonelo sokuthi wena njengezwe ungaphoqa kanjani abantu ukuthi banamathele kukho. I-China ibuye ikhombise ukuthi umuntu omele ophikisayo ushiywe kanjani nje ngaphandle. Lowo umphumela wokuzenzakalelayo wohlelo olunjalo. Ekugcineni, izindimbane zizokhothama kuyo, ngokwengxenye ngoba abaningi emphakathini uqobo basebenzela izingxenye zohlelo. Uma unomsebenzi ku-ICT futhi uhlinzeka ngesoftware yedatha noma unikezela ngezinhlelo zekhamera, uma usebenza njengesikhulu esiphenya noma njengamaphoyisa, usayikhetha imali oyitholayo. Kunjalo-ke.
Kungamampunge ukusho ukuthi, "Ngemuva kwalokho ngilahla i-smartphone yami ukuze ngiphume ohlelweni". Sizoya esikhathini lapho ukuzibandakanya komphakathi kuba yinto engenakwenzeka ngaphandle kwe-digiD noma ngaphandle kwe-eHerkenning (yezinkampani). Kuzokwenzeka okufanayo nangobuchwepheshe obusha be-corona. Uma ulahle i-smartphone yakho, ngeke usakwazi ukungena esitolo.
Ngabe kuzofika kulokho? Isinyathelo ngesinyathelo cishe izofika kulokho. Futhi-ke ungasinda kuphela uma unengadi yakho eyabelwe, kepha lapho-ke kufanele futhi uthole imbewu yakho kuyo, ngoba lokho kuzanelisa kungenzeka nokuthi kungavinjelwa esikhathini eside.
Isinyathelo esilandelayo kuzoba ukuthi awusavunyelwe ukungena ezindaweni zomphakathi uma ungazange uthole umuthi wokugoma. Futhi idatha enkulu nayo izodlala indima kulokhu. Uma uhlelo lwakho lokusebenza luthi uthola umuthi wokugoma, isango lokungena esitolo liyokungenisa; ngaphandle kwalokho. Esigabeni sokugcina, uhlelo lokusebenza elinjalo kungenzeka ukuthi lithathelwe indawo yisimo esidijithali esixhunyaniswe nomzimba wakho. Futhi kuzobe kuphelele uma ibhalansi yakho yasebhange ixhumekile nakho konke lokhu. Ngokushesha ngeke kube nokuphunyuka ngaphandle kokuthi ukhetha ukuhlala 'endle', kepha kwabaningi lokho kuzoba yibhuloho kude kakhulu.
Singamemeza esikufunayo; singakhala sithi asikufuni konke, kepha kufana nokukhala ogwadule. Iningi lincike 'ohlelweni'. Kungakho sekuyisikhathi sokuqala ukucabanga ngalokhu: Uma ungakwazi ukushaya i-'m ,joyina 'em.
Kumele siqhamuke nezixazululo zikakhonkolo ezingabuye zitholwe yilabo abasebenzela 'uhlelo'. Kufanele size nezisombululo ezikhonkolo nezisebenzayo eziqinisekisa ukuthi abantu abalahlekelwa izinto ezithile, kepha banakho. Manje sesithembele ngokuphelele ezinqumweni ezibekiwe ezivela phezulu. Uhlelo lwezepolitiki olukhona njengamanje lusiphoqa ukuthi samukele lezo zinqumo ngaphandle kwanoma yiluphi uhlobo lokuzibandakanya. Lokhu kungenziwa ngokuhlukile. Lokho kumele kwehluke.
Kukhona ithuba! Ngemuva kwakho konke, kunethuba lokuguqula izinto ngobuchwepheshe obufanayo kulezi zinsuku, ngaphandle kwalokhu okufanele kuguqulwe wonke umphakathi phansi. Akudingi ukuvukelwa okukhulu noma ukuvukela okukhulu. Wonke umuntu angaqhubeka nokwenza abakwenzayo.
Ukuphela kwento eguqukayo isakhiwo sokwenza izinqumo. ONgqongqoshe nezikhulu manje esezibikela umqhele futhi zisebenza ngemithetho ngaphandle kwemvume yabantu masinyane kumele zibikele abantu. ONgqongqoshe kufanele bashintshwe abamele abakhethwe ngabantu ngqo (ababamele abantu ngempela hhayi umqhele).
Konke lokhu kungenzeka ngomgomo wentando yeningi oqondile. Kuyo intando yeningi eqondile, ukhetha abamele bakho online. Ungaba yilowo nalowo mgadli noma uzongenela ukhetho futhi uhlelo lokuvota luqinisekisa ukukhethwa nokukhula ngokusekelwa. Kufana nezinhlelo zokuvota njengeHolland Got Talent nezinye izinhlelo zeTV. Ubuchwepheshe bukhona, amathuba akhona futhi azosebenza.
Amalungu ePhalamende akhethwe ngokuqondile kufanele enze lula imithetho futhi ayethule kubantu ukuze ivunyelwe noma ibuyekezwe. Kusuka ezinkulungwaneni zemithetho, ukucaciseleka, kusuka ngobuningi kuye kwikhwalithi. Ukubamba iqhaza komphakathi ngokuqondile.
Singalinda kuze kube yilapho imithetho yokugoma evunyelwe isivumela ukuthi sikhethe ukuthatha umuthi wokugoma noma siye ejele, noma singabamba ngamandla. Kumele sibambe le nkinga ukuze silethe ushintsho. Shintsha indlela esifuna ngayo! Intando yeningi eqondile ingathatha isikhundla sesakhiwo samandla esikhona ngohlelo lokuvota oluku-inthanethi ezinyangeni ezimbalwa.
Manje yisikhathi sokwakha ukusekelwa kwalokhu. Gxila kuleli thuba, cabanga ngakho futhi ufunde ukuthi kusebenza kanjani. Isikhathi sokuthatha isinyathelo futhi sokuba ushintsho. Cindezela inkinobho ukuthola eminye imininingwane bese usayina isicelo.
Amathegi: kuka, Izinhlelo zokusebenza, big, Covid-19, idatha, intando yeningi, ngqo, er, afakiwe, i-fvvd, kwenzeka, Ngiyenqaba, online, uvote, ubuchwepheshe, ukugoma, ukugoma, isibopho sokugomela, ukuzibophezela, Wat, yenqaba, ukwenqaba, umthetho
14 May 2020 ku-12: 22
14 May 2020 ku-13: 16
Kepha kumahhala uMartin, uJan Peter udlala indima yobuphayona
OwayenguNdunankulu u-Balkenende ufuna umuthi wokugoma wama-corona mahhala wonke umuntu
14 May 2020 ku-13: 26
Hawu ujabule, kahle-ke akukho okuzokukhathaza.
Mahhala = kusuka ebhodweni lentela futhi ngenxa yalokho ekugcineni ngokwenyuka kwentela = hhayi mahhala
17 May 2020 ku-15: 23
Ukuqinisekisile ukuthi lokhu kuza eMadurodam, maduze uma izimbumbulu zenziwa ngenxa yalesi sibhicongo, ucezu loqhwaku lwababa. Izimbongolo ezanele zokwenza umsebenzi ongcolile ...
UMichael Gove wembula ngaphezulu kwama-17,000 ama-coronavirus tracers asebethathiwe - banamahloni nje kwelitshe le-18,000 - kulezi zimangalo baqashwa izinyanga ezintathu zokuqala
14 May 2020 ku-13: 23
I-Covid, ngalokho-ke imelele isitifiketi sikamazisi wokugoma (2020)
14 May 2020 ku-13: 33
Banike umunwe 🖕, bathi Cha
14 May 2020 ku-14: 41
I-19 ngemuva kweCovid imele i-AI, uma uhumusha izinhlamvu ngezinombolo. Ngakho-ke iSitifiketi Sokugomela Ubunikazi be-Artificial Intelligence.
Singasho ukuqagela ukuthi yonke imininingwane eyebiwe igcina kuphi, uhlelo lwePalantir Yebo! Landelela futhi Ulandelele
14 May 2020 ku-15: 33
@riffian Ngqo !!! AI kufanele idatha wapha, oh ukuthi yebiwe yeah kwesokudla!
Sidinga izimpendulo eziphuthumayo mayelana nedatha enkulu ye-NHS COVID yedatha
Kungani uhulumeni UK yokwenqaba ukukhulula imininingwane 'okungakaze' ukudluliswa yayo idatha ku-US tech zilo? Uma singazi uthole izimpendulo, singase sifune kubo ezinkantolo.
14 May 2020 ku-14: 58
Ividiyo emnandi, ikakhulukazi eyokugcina ngina-I AM, funda inhloso, umgomo. Imisuka imvamisa iguqula amagama.
Lapha futhi kwabafundi abasha. Ngenhlanhla, kufakwa nokunye okuningi. Abantu baphinde banikele okusiza uMartin njalo. Umsindo wakhe uthembekile futhi unobuhlakani. Awukufundi lokhu kwenye indawo. Indawo yakhe kumele igcinwe phezulu emoyeni. Bona i-athikili yakhe mayelana nokuhlaselwa kwe-Ddos endaweni yakhe
Lokho kukhulu kakhulu kunevidiyo esusiwe yeJensen 33. Okuyikhona okwakuvunyelwene ngakho ngeYt. Ngokuthengisa kwakhe ihembe, bese usho ukuthi konke kuzolunga. Uhlala eVondelpark, unemali efana namanzi. Ngiphumula icala lami.
Futhi qaphela ukuthi uJensen ukhuluma kangaki ngesicathu selosha entanyeni yakhe.
Futhi nakhu futhi isikhumbuzi ukuthi kungani kufanele ungathathi lelo hlumela. Uma ufunda njengalapha kuleli sayithi, futhi uthola ulwazi ngenombolo ethile. Uyazi ukuthi kufanele noma ungakholelwa yonke into lezi zinombolo okukhulunywe ngayo. Futhi ngokuqinisekile ungakuvumeli ukungena emzimbeni wakho.
14 May 2020 ku-18: 34
Vuma. Angikutholi konke uMartin akubhalayo noma akuhlongoza, kwesinye isikhathi kukuthola kukweqisa noma akunangqondo, kodwa ngomsindo wawo oyingqayizivele uyisaga esithi 'canary emayini yamalahle' yenkululeko yokukhuluma eNetherlands. Leli sayithi KUFANELE lihlale lisebenza futhi empeleni: izivakashi nabasekeli abaningi, okungcono.
Ngingavumelana ne-athikili engenhla, kepha ngikholwa ukuthi izinguquko ezihlongozwayo kufanele zisatshalaliswe isikhathi eside (uma ufuna ukuthola abantu abaningi ngangokunokwenzeka, futhi mhlawumbe namanye amazwe). Abantu kumele benziwe kuqala 'ukuvuthwa' ukuze baphenduke kakhulu. Ngaphandle kwalokho, abaningi bazothukile, uzoba nodlame, isiphithiphithi, usizi, futhi lokho ngeke kube inhloso.
Qhathanisa i-wmb nomuntu omile imilenze iqandiswe ama-degree angama-30 ebusika baseSweden. Uma usifaka ngokushesha kubhavu oshisayo, uzowenza umonakalo ungalawuleki. Kumele ikhule kancane, futhi kuba njalo nangabantu abaningi. Banikeze iminyaka eyi-10 yokwenza lokhu (yize nginovalo lokuthi asinayo iminyaka eyi-10 yokuvimbela umthetho wamanje wempi ukuba ube umbuso wamaphoyisa waphakade).
14 May 2020 ku-20: 33
Ngithola ithoni eyehlisa umoya yokuthi 'okungenangqondo' futhi 'eyeqisayo' ayifanele neze. Uma iqembu elilodwa lingenangqondo futhi limatasatasa kakhulu, lo hulumeni ongakwazi ukuvala umsebenzi.
Akuwona lowo mbono kaXander lapha kusayithi obalwa njenge-gauge nokuthi sibheka isinqumo sikaNkulunkulu wakho sokuzilunga sika-X. Isikhathi sokulahla lolu hlobo lokugxekwa futhi uthathe isenzo. Yiba ushintsho ngokwenza.
Ngikholelwa kakhulu ukuthi uhlelo olusha oluphakanyisiwe ku-fvvd.nl kumele lusethelwe ezinyangeni ezimbalwa. Asinaso isikhathi sokuchitha.
Ngiyenqaba ngokuphelele ukuphawula kwakho. Uma silinda ezinye izinyanga ezimbalwa, iKhabhinethi lamanje seliguqule wonke umphakathi laba amamitha ayisigamu omuntu futhi zonke izinhlobo zezindlela zobuchwepheshe ziyaqaliswa ezisibeka kuwebhu lokulawulwa kobushiqela.
Ngingasho-ke ukuthi: ungayibeki ithrekhi ende bese uyikhipha njengento engenangqondo futhi engenangqondo. Kuyinto eyeqisayo futhi engenangqondo ukuthi sigcina sikhononda futhi sibhala izindatshana lapho konke kungahambi kahle khona nalapho imigomo nezitifiketi zedijithali zingasilimaza.
Kugwala ukukufaka ekuvuthweni kwabantu. Abantu futhi abazilindelanga lezi zindlela zokuvala umnyango futhi manje sibona ukuthi uhulumeni uphoqelela izinyathelo 'ezingezona ezingokoqobo' futhi 'ezeqisayo' emasontweni ambalwa.
Ngakho-ke ngithi Cha ngokhahlo olugxekayo ekugxekeni kwakho futhi ngiphakamisa ukuthi ubize abantu Thatha isenzo MANJE. Imizuzu eyi-1 kuye kweyi-12 futhi asikwazi ukulinda iminyaka eyi-10.
Ungabuza futhi imibuzo engxenyeni yombuzo nezimpendulo yesayithi: https://www.fvvd.nl/qa/
14 May 2020 ku-22: 14
15 May 2020 ku-07: 03
Abaphilisi abamnene benza amanxeba anukayo…
Abantu badinga ukushukunyiswa, kepha kubukeka sengathi banobunzima.
15 May 2020 ku-16: 01
Ngithola impendulo yakho ku-Xander icocekile kahle futhi ngoba nginezinsolo eziqinile zokuthi i-Xander ayisikhubekiso. Ngeke ngikuchaze lokho. Umuntu ofunda njalo angayazi engikushoyo.
14 May 2020 ku-13: 37
14 May 2020 ku-15: 01
Kuyamangaza ukuthi angikaze ngiyibone le kliphu, angikaze ngifunde i-TV futhi ngiphendule i-CD ngampunga. Ngempela kuyindida engaziwa kakhulu yokunqunywa. Futhi nje ungumlandeli walowo mculo waleli bhendi. Ezinsukwini zakudala.
14 May 2020 ku-13: 56
Uhlelo lokuqagela olwengeziwe, iskripthi besivele sifakiwe ochungechungeni oluFile - PLAGUE ngo-2003
14 May 2020 ku-15: 47
I-idd ebalulekile ye-clip kukhona nokukhuluma nge-corona (ra33oon), Ukuwa Phansi kusuka ngo-1993 ngomsolwa ojwayelekile u-douglas wayehlukile ebusweni be-ur.
amashumi ezigidi zabantu ngeke esadingeka.
14 May 2020 ku-14: 06
Isigaba esiphakathi / isigaba sizodonswa ngokuphelele ngokwezezimali okungenani unyaka, ukuze maduze sihanjiswe kuBaba State njengamawundlu.
14 May 2020 ku-15: 09
Impela yebo. Ngale ndlela wonke umuntu uncika ngokuphelele. Ayisacabangi ngokuhlolisisa ngoba igcinwa. Kusindiswe kuphela ngendlela yokuthi ngicabanga ukuthi ungalincoma izulu. Bese kuthi-ke umsindisi wakho kube nguyena okuphoqe ngamabomu wena nomndeni wakho kwalasha. Kepha ekuqaleni bazoyibona ngenye indlela. Kuze kube sekwephuze kakhulu, ngemuva kwakho konke, imigomo ingavele igonyelwe abantu emazweni angafakazwanga kunoma yikuphi. Qhamuka kwabasolwa abajwayelekile, futhi bazihlelele ukungazigcineli. Ngabe lokhu kugoma kukulimaza nganoma iyiphi indlela. Lokho kuhlela empeleni kukhuluma yonke indaba.
14 May 2020 ku-15: 28
Lapha enye impisi esembathweni sezimvu u-Eric Schmidt, bonke abasolwa abajwayelekile bayabandakanyeka kulokhu kugqilazwa kokugcina kobugqila. Futhi kufaka i-hoax yesimo sezulu ku-ajenda yabo ngenkathi bematasa
Xhumana ne-Tracing Group Exhaswe NguSoros noGates, Ube neCloud Clinton eseBhodini
'kufanele sibonge' ngezinhlangano ezinkulu abantu 'abathanda ukuzilimaza' (Sibiza le FASCISM)
Ividiyo ifihliwe, ngqo ukuthi isebenza kanjani.
14 May 2020 ku-15: 37
https://www.cbsnews.com/news/trump-economic-club-speech-live-stream-president-trump-at-the-new-york-economic-club-today-2019-11-12/ (UTrump uyingxenye yenkinga, ukhohlwa i-Q bullshit !! Wethembe uhlelo, uhlelo lwabo)
14 May 2020 ku-17: 20
UTrump uthandela umuthi wokugomela, bheka ukuthi ukunyakaza kwe-Q kusabela kanjani kuwo.
15 May 2020 ku-16: 41
I-REVEALED: Isifo 'sikaTrump' sokuhlasela kwesithangami sabezindaba ebesisindisiwe embikweni we-wargame abesiphethe - obexwayisa ngokushoda kwezokwelapha, imali enganele, nokudideka kombuso ezinyangeni ezimbalwa ngaphambi kokuqubuka
20 May 2020 ku-18: 50
kahle manje ngiqala ukukuqonda kangcono…
I-MEDIA IGNORES ISRANO SESIQINISEKISO ESIKHUNDLENI SE-ERIC SCHMIDT SOKU-NY "IMITHI EMISHA"
14 May 2020 ku-15: 46
Bona lapha ukuthi ngobuhlakani badlala kanjani lowo mdlalo. Zibonisa nje ngokoqobo ukuthi zizokwenzani. Funda izingane ezivela emindenini. Licashe ezempilo, futhi ngoba ungenayo 2 zangasese ngoba ngokuhlukaniswa. Kepha vumela umuntu akutshele ukuthi ngubani okuphikisana nakho. Futhi inikeza oyibamba ayempofu kakhulu. Kodwa unayo inombolo ukuthumelela, okuthiwa ukubukela phezu nomunye. Futhi-ke banenombolo yakho yokulandela othintana naye. Hawu yebo ingane yakho cishe ngeke iphinde ikubone futhi, futhi ayi yafa yiCovid. Umbhalo 80123, funda 9 no-33. Bese ulahle konke obenakho. Yenza Melika ...... .. kahle
Vele bheka ngokusebenzisa umlingisi, futhi uzobona ukuthi yini ufaka.
14 May 2020 ku-16: 31
Pledge ukusekela nokuhlonipha New World Order
14 May 2020 ku-21: 56
15 May 2020 ku-03: 25
Noma ngubani oke wavota empilweni yabo kufanele asayine lesi sicelo. Manje sesingabona ngokucacile ukuthi kwenzekani lapho uvumela imidlwane yethelevishini ilawule impilo yakho. Ukuthola nje ukunakwa ukuthi kusekelwe emangeni, njengoba kufundwe kule ndatshana. Ukuvota kubuye kusithathe sikusebenzise nasekuvaliwe.
Angihlali ngithatha i-chip noma ukugoma, kepha ngivinjelwe. Kunoma ikuphi, kufanele sibuyele emvelweni ukuze sizithole. Ngisho noJesu kwadingeka ukuthi aye ogwadule ayoxhuma. Angisho ukuthi kufanele ukholelwe kuJesu, ngikhuluma nje ukuthi sisendleleni efanayo.
15 May 2020 ku-06: 30
Kuhle ukuthi kusekhona odokotela abanjengoDokotela waseJalimane https://www.youtube.com/watch?v=6bIAXtciwk0&feature=youtu.be
15 May 2020 ku-06: 59
Kwividiyo kadokotela waseJalimane esixhumeni esedlule uthi kukubi iqiniso okuyikho. Emgqonyeni wokusho ukuthi AKUFANELE siphindele "esimweni esijwayelekile" sethu. Lokhu kuyiqiniso impela, ngoba kusho ukuthi okudala ukwenze ukuthi sikwazi ukusiyisa esimweni esikuso manje. Ngakho-ke kunesidingo esisha esijwayelekile, okungewona umphakathi wamamitha ayi-1,5 nawo wonke amasu okubheka, kepha okujwayelekile okusha okuhambisana kakhulu nephuzu le-FVVD kaMartin. Mhlawumbe lokhu kungafakwa kumlayezo we-FVVD?
15 May 2020 ku-09: 48
Ngiyakholelwa ekutheni umyalezo kaMartin ucacile!
15 May 2020 ku-08: 18
Okungenani kimi "endle". Ngokushesha lapho sesiba umbuso ongcolile ophelele ngipakisha izinto zami bese ngihambile. Ngingathanda ukubulawa yindlala endaweni ethile phakathi kwendawo kunokuvumela ukukhululeka kwami ​​kuthathwe.
15 May 2020 ku-09: 47
Angicabangi ukuthi ungahamba uma leso sikhulu samaphoyisa sikhona. isimo samaphoyisa = uhlelo lokudlanga, uyingxenye yombuso. Ohlelweni lokukhwabanisa, inceku ayikwazi futhi akufanele yenze lutho ngaphandle kwemvume yomnikazi / yombuso.
Ngaphezu kwalokho, ufuna ukuya kuphi konke kuxhunyiwe emhlabeni wonke, kuhlanganiswe futhi kulawulwa yi-Them. Ngiyazibuza ukuthi izakhamizi ongathanda ukuya kuzo zikulindile yini. Ukuncintisana kukhona futhi phakathi kwabantu. Sisesimweni esinzima ngakho-ke kufanele sizisombulule thina lapha eMadurodam. Isibalo sabantu abaningi asikuqondi ngokubandakanyeka okungapheli.
16 May 2020 ku-10: 51
Lapha uMartin uqinisile ngakho konke lokho kudana, futhi ikakhulukazi umphumela we-chimeric.
Futhi ucezu lwangaphansi luvela ezimfundisweni zeFreemasons nezindaba zabo. Ngamanye amagama kufanele siphendule ngokushesha okukhulu. Ngakho-ke ubona ukuthi yini umuntu angaphuma kuyo umbhalo welebula. Izinto ezisongela impilo, futhi ngokubeka nje, bafuna ukukubulala, bazenzele izwe elisha. Indlela isihogo abantu abaningi kangaka abajoyine ngayo le mfundiso.
I-induvidual ibanjwa ngesandla ngokufika ubuso nobuso ngecala lokuzungula.
Ngakho-ke omangalisayo akakholelwa ukuthi kufanele.
ISodoma, Pedophille, 33 Freemason. J Edgar Hoover
Umqondisi we-FBI, yiliphi uzungu?
Ukhuluma nangeGileyadi, umenzi wokugoma. Yini ngesiHeberu emele uGaleed.
Funda inqwaba yokufakaza igama le-chaldee elilingana neGaleed in hebrew. Kokubili okumaka isimo sesivumelwano. Phakathi kukaJacob neLaban gen 31:47 (lokhu kukhombisa ukuthi yini abayilandelayo, hhayi ukutholela umuntu ibhayibheli)
UPapa Francis encyclical Laudato si (iphepha lokufundisa) ufuna kubulawe abantu abayizigidi eziyizinkulungwane eziyisithupha.
Bona incazelo: Futhi lokho ngokusobala abafuna ukukusebenzisa. UTrump naye kubukeka sengathi ubiza abezempi ukuthi bagome wonke umuntu, afunde efile. Futhi iMelika, enezikhali zayo eziyizigidi ezingama-400 ezandleni zayo, nayo izokuhlala ithule. Yinqayizivele ukuthi ungalungiswa. Futhi angibusekeli ubudlova. Kepha abasolwa abajwayelekile bayakwenza.
17 May 2020 ku-12: 21
Ngizokwenqaba futhi lezo zivivinyo, ngoba nazo zingagcwalisa imininingo egciniwe ye-DNA. I-Die Schippers manje isise DSD futhi inhloko yangaphambili ye-DSM Sijbesma manje isibhekene nokuhlolwa. Bukela ukuqasha kugijimela, abasolwa abajwayelekile badlala ngazo zombili izinhlangothi, vuka !!
Umdanso wesihlalo uqediwe
17 May 2020 ku-18: 21
Ukuthi usenaye umbuthano wabangani, onengiso… .. Kuhle futhi ukuthi kwacaciswa kithina ngemizuzu eyi-13.33. Ihlekisa kanjani le nkinga? Futhi zinambitheka kanjani izigqila. Ngeshwa, izigqila kaningi zingabantu abanonembeza. Ngeke usho ngabo bonke labo badlali.
17 May 2020 ku-14: 29
Kungani ugomela uma kunemithi eyanele yokulwa nokuhlukahluka komkhuhlane?
I-WHO yanikela nge- $ 20M Bribe To Poison COVID-19 Cure - uMongameli waseMadagascar
Kwentuthuko ethusayo uMongameli waseMadagascar wenze isimangalo esiveza ukuthi i-WHO yanikela ngenkani ku-$ 20m yokufumbathisa ubuthi be-COVID-19. Umuthi we-herbal obizwa nge-COVID-19 Organics owenziwe kwa-Artemisia ungalapha iziguli ze-COVID-19 kungakapheli izinsuku eziyishumi kusho uMongameli.
18 May 2020 ku-13: 33
ENigeria, isisekelo se-billy goates foundation singaphansi kwengilazi ekhulisayo kulandela izinsolo zokufumbathisa, iBurundi neTanzania zikhiphe i-WHO / melinda kanye nezinto ezikhokhwayo. Ngakho-ke nakho kungaba njalo, singathatha isibonelo lapha.
18 May 2020 ku-18: 05
Ngisaqhubeka nokumangala ngeBMF. Futhi ikakhulukazi ukuthi baningi kakhulu abantu abavikela izinyo nezipikili. Ngoba unika kakhulu izisa zokupha. Ngenkathi enza okungenani i-80% ibuyele ekutshaleni. Ukube uBill wayemnandi kangaka, yena nabangane bakhe abacebile ngabe basindisa umhlaba endlaleni nasekomeni isikhathi eside. Esikhundleni sokudlala uhlukanise futhi ubuse ezweni lakhe lokuhlola lomhlaba wonke. Ukuthi akenzi, futhi usebenzisa abantu njengezilwane zokuhlola. Abantu kufanele basavelele. Banemali eningi, bangalungisa konke usizi emhlabeni ngesonto. Akukho ukulamba akukho ukoma, kungabi bikho mpi ngokushona kwezingane nokunye njll. Kepha abakwenzi lokho, ngakho-ke akukho lutho oluhle nge-BMF yonke. Ukubopha kohlobo oluphansi kakhulu, ngeshwa imali eningi kakhulu.
20 May 2020 ku-08: 46
Ngiyazibuza ukuthi i-RIVM izilahlile yini lezo amamodeli we-Imperial College okwamanje, ngoba azinankinga. Ubufakazi obengeziwe bokuthi imininingwane eyakhiwe ukusekela i-ajenda ethile:
ICorona-Modelferung war "schlimmster Software-Fehler aller Zeiten"
Itimu ye-Mehr zum.
I-Benachrichtigung über neue Article:
I-Politik Corona Virus
I-Die Modellierung des Imperial College zur Corona-Epidemie, auf der umfangreich Maßnahmen und Verbote beruhen, isoftware Software-Fehler auf, sagenvanoi weltweit führende Daten-Ingenieure.
20 May 2020 ku-10: 46
uyahlanya, lezo zinhlobo zinhle kakhulu ukuthi ungazilahla "IT WOBBLES"
I-RIVM: Inombolo yokuzala kabusha 'ama-wobble' phakathi kuka-0,7 no-1
20 May 2020 ku-13: 42
hahahaha idd iWuhan Wiggle inembile.
23 May 2020 ku-15: 43
Lalelisisa lo msolwa ojwayelekile ukuthola ukuthi bafaka ini imigomo.
« Ukwehla okukhulu kwemali ngesikhathi senhlekelele ye-corona kuholela ekuphikiseni: ingabe i-bitcoin isisombululo?
Ukuhlangana kweZindaba Zikahulumeni uJordie Zwarts kwehle ngamathani, kepha akukho okuzuzayo »
Ukuvakasha okuphelele: 2.422.531